KALA DUWANAANTA CALEEMAHA "AMUR" - VITICULTURE
Kala duwanaanta caleemaha "Amur"
Canabadu waxay muddo dheer noqdeen hanti ma aha oo kaliya beeraha koonfureed ee koonfurta, laakiin sidoo kale goobaha gaarka ah ee gobollada Waqooyiga ee qabow ee Russia.
Laakiin dad badan ayaa la yaabay in ay jiraan noocyo asal ah oo dabiici ah oo laga helay cilmiga sayniska waxayna hadda si firfircoon loogu isticmaalaa taranta sidii deeq bixiyayaal badan oo iska caabin ah.
Waxaan ka hadleynaa canab "Amur", oo ka mid ah noocyada ugu badan waqooyiga ee geedkan quruxda badan.
Sababtoo ah sifooyinka wanaagsan ee uu leeyahay, wuxuu ku kasbaday meel sharaf leh ee liiska ku saabsan noocyada canabka ah, waana sababtaas awgeed waxaan kuu soo bandhigi doonaa canabkiina Amur ee maqaalkani.
Siraha iyo waxyaalaha la isku qurxiyo ee "Amur": oo dhan oo ku saabsan fasalka
Kala duwanaantan ayaa iska leh tan ugu caansan, maadaama ay macquul tahay in la dhiso meel kasta oo ay ka muuqato kaymaha gobolka Amur. Inkastoo taariikhda dheer, canab dhanaan ah Amursky muujinaysaa qaabka ugu wanaagsan ee cimilada casriga ah ee gobollada kala duwan ee Russia. Dabeecadda, waxaa laga heli karaa meel kasta, iyo xaaladaha dabiiciga ah, waxay muujinaysaa iska caabin aan caadi aheyn, hal canabkiina waa la jiidi karaa ilaa 30 mitir.
Dabcan, tani waxay sidoo kale ka hadlaysaa dhalidda aan caadi ahayn taas oo noocyada kala duwan ay awoodaan in ay ka farxiyaan. Laga soo bilaabo qeybtii hore ee qarnigii la soo dhaafay, canabkan duurjoogta ah wuxuu aasaas u yahay xulashada Beelo badan, oo maanta lagu raaxeysto caan aad u sarreeya: noocyo "Northern" iyo "Dawn of North", "Talisman", "Skiff", "Triumph".
Kala duwanaanshaha caanaha "Amur"
Foomka caadiga ah ee farqiga canabku waa cylindrical ama silyloom. Itaaladu si adag looma soo habaynin, sababta oo ah kooxdu waa dabacsan tahay dhismaha. Dhexdhexaadkani wuxuu noqon karaa 10 ilaa 15 sentimitir. Cabbirrada nooca berry iyo kooxo waa yar yihiin.
Canabka waxaa lagu ogaan karaa midabka madow ee berry, kaas oo sidoo kale leh ubaxyo nadiif ah. Maqaarka berrida ayaa inta badan aad u cufan, taasoo u dhiganta ku habboon gaadiidka. Dhexdhexaadiyaha, hal miro yar oo wareeg ah wuxuu ku saabsan yahay 1.5 sentimitir.
Hilibka berry waa iftiin iyo aad u casiir leh. Dhadhanka canabka ee "Amur" fudud, waxay noqon kartaa labadaba casho iyo macaan, iyadoo ku xiran xaaladaha ah Bisaylkiisa. Rootiga noocyada kala duwan ee loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa isticmaalka cusub iyo soosaarka wax soo saarka labaad: miirka, khudradda iyo khamriga, iyo sidoo kale qalajinta. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo qallal ama tartaric acid.
Inkastoo xaqiiqda ah in canabkani uu si aan caadi ahayn ugu koray qiyaasta warshadaha (ujeedadaas, baaxadiisu waxay aad ugu guuleeysataa sidii dalag), miraha waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro saliid subag iyo kaafi.
Amur Grape Yield Volumes iyo Shuruudaha Uruurinta
Canabkani wuxuu ka mid yahay noocyada celceliska muddada celceliska Bisaylkiisa, taas oo aan la yaab leh gobolka gobolka dabiiciga ah ee koritaanka. Geedka ubaxa canabkuna waa badan yahay, tan iyo dhammaan caleemaha, 80% waa kuwo miro badan. Isla mar ahaantaana, sababtoo ah tirada yar ee rucubada, laga bilaabo 1 ilaa 3 waxay ku jiri kartaa hal jaale. laga bilaabo hal hektar oo ah geedaha canabka ah ee noocyada kala duwan, waxaad ka soo ururin kartaa 60 illaa 80 cagood oo ah dalagga si fiican u bislaaday.
Si aad u soo goosato gobolka Amur, waxaad bilaabi kartaa qeybta hore ama badhtamaha bisha Sebtembar.
Haddii aad ku koraan canab dhanaan ah sida miraha canabka ah, gooyo oo u samee baadiyaha waqti go'an, daaqsinka dalagga ayaa laga yaabaa inuu waxoogaa hore u dhaco, maaddaama ay kooxahaasi helayaan kuleyl badan iyo qorraxda.
Noocyada iyo tayada wanaagsan ee canab "Amur"
Kala duwanaantu maaha mid ka cabsanaysa dhaxan. Xitaa yaraynta heerkulka illaa -40 ° C digaaga geedku ma muujin wax waxyeello ah oo dhan. Sababtan awgeed, canabka ayaa loo isticmaalaa taranka oo u adeega sidii deeq bixiye tayo leh.
Sidoo kale, xataa beergooyska maaha mid cabsigeliya xilliga dayrta, kaas oo dhadhan ay kici karaan oo kaliya, oo ka dhigaysa berry more macaan.
Nabaro ka mid ah cayayaanka ugu caansan iyo cudurrada beeraha canabka ah ayaa ahaa kuwo aan la arkay. Waxaa muhiim ah in la adkeeyo adkaynta canab si ay u xiirto.
Bisaylka ah ee goosashada Amursky canabku si degdeg ah, kaas oo u ogolaanaya in la goosto ka hor bilawga qabow iyo dhaxan.
Dhirta sare iyo isticmaalka ballaaran ee canab.
Suurtogalnimada canab iyo miraha gaaska.
Koritaanka sare ee baadiyaha canabka ah, taas oo marka la barbardhigo noocyada caadiga ah ee taranta ayaa loo yaqaan karaa giant. Koritaanka dhamaadka geedka canabka ah wuxuu noqon karaa ilaa 2.5 mitir.
Kuurku wuxuu si wanaagsan u miro dhaliyaa oo u dulqaadanayaa manjooyin iyada oo aan wax dhibaato ah.
Iyada oo loo mariyo canbaar, waxay awood u leedahay in ay si dhakhso ah iyo si wax ku ool ah u qaadato oo la qabsato xaaladaha cusub ee sii kordhaya.
Aad bay muhiim u tahay xulashada noocyo cusub oo canab ah.
Waxaa loo adeegsadaa madadaalada iyo jardiinooyinka taageerada tooska ah, oo abuuraya caqabado nololeed.
Noocyada faa'iido darrada: dhibaatooyinka ay keeni karaan beerista canab "Amur"
Cabbirada aan caadiga ahayn ee geedaha badani waxay keenaan dhibaatooyin badan marka goosashada. Sababtan awgeed, badi ka mid ah xargogaha ayaa inta badan ku haray.
Si loo kordhiyo xajmiga iyo tayada dalagga baadiyaha u baahan tahay manjooyin joogto ah oo aad u xoog badan, taas oo kugu qasbi doonta inaad si aad ah u shaqeyso.
Berry Gureetku kuma raaxaysan karo dhadhankiisa, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, wuxuu magdhow karaa dib u soo kabashada dibadda ee baadiyaha.
Waa maxay khaasatan beerashada canab "Amur": dhammaan xeerarka iyo marxaladaha
Canabka "Amur" waxaa loo fidin karaa siyaabo badan, oo ay ka mid yihiin:
Beerto geed baadiin ah oo leh miraha varietal.
Isticmaal canab beerto "Amur" laanta kale ee baadiyaha ah ee kala duwan.
Gubinta gooyn ah geed caleen ah oo ku saabsan soodhada noocyo kala duwan.
Sababtoo ah badbaadada ugu fiican ee noocyada kala duwan ee xaaladaha cimilada iyo waxtarka wanaagsan, abuur canab beertaada ma noqon doonto wax dhibaato ah. Laakiin sida noocyada kala duwan ee kale, Canab Amursky ayaa ugu wanaagsan lagu beeray meelo iftiin leh. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in si degdeg ah Bisaylkiisa dalagga iyo koritaanka wanaagsan ee baadiyaha sabiib ah.
Canab waa kuwo aad u wanaagsan oo aan loo baahnayn iyo dabayl qabow waqooyiga, kaas oo si xun u saameyn kara ubax, gooyaa inflorescences oo ka tago adiga oo aan goosan.
Ha ilaawin koritaanka degdegga ah ee geedka canabka ah, ka hor intaan la beeriin waa mid aad muhiim u ah si aad u diyaariso taageerooyin gaar ah si ay u soo saarto geedka canabka ah.
Waqtigee ayaa ugu fiican in la doorto canab beerto "Amur"
Beerta laga beerto ee noocyada kala duwan waxay si toos ah ugu xirnaan doontaa habka beerto ee aad doorato. Wixii dhirta canabku si fiican u doorto gu'ga. Waqtigani waa mid aad u diiran ee biqilka iyo rooting, iyo waxaa jiri doona xilli oo dhan ka hor for koritaanka baadiyaha cusub. Sidaa darteed, canab ah ee beeray guga waxay lahaan doontaa wakhti ay ku sii xoogaystaan ​​oo ay xoog yeeshaan ka hor bilawga ah ee dhaxan xilliga qaboobaha. Guga iyo dayrta labadaba waxay ku haboon yihiin tallaalka.
Farqiga wuxuu ka koobnaan doonaa oo keliya marka la eego xilliga dayrta isdaba-marinta saamiyadu waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo daboolo iyo in la sameeyo wax kasta oo suurtagal ah si ay u sii socoto illaa guga qadar ku filan oo qoyaan ah kaas oo hubiya dhaqdhaqaaqiisa muhiimka ah.
Seeds of this canab waa ugu wanaagsan loo diro dhulka dayrta, ka dib goosashada. Xilliga dayrta, sidoo kale waxaa lagu beeraa karaa, laakiin ka hor intaadan u dirin dhulka, waxaa lagama maarmaan u ah in lagu rusheeyo abuurka biyaha iyo qabsashooyin kale oo badan, taas oo lagu sharxi doono faahfaahin hoose.
Hababka of dhar beertii canabka ah: xulashada ciidda, qorshaynta beeraha
Geedka canabka ah ee "Amur" waa mid si fiican u isku dhafan yahay noocyada kala duwan ee carrada. Dabcan, taasi Waxaa ugu fiican ee ku habboon ciidda leh nidaam dheecaan wanaagsan iyo heer celcelis ahaan acidity ah. Hase yeeshee, inkasta oo qiimaha aan caadiga ahayn la arkay marka laga beerto geed canab ah on humus iyo limestone, on carradu leh dhacdo aad u dhow ee biyaha dhulka.
Marka loo diyaariyo godadka canab, waa in maskaxda lagu hayaa in masaafada u dhexeysa duurka waa inay ahaataa ugu yaraan 1 mitir, haddii kale waxay faragalinayaan midba midka kale. Khubarada sidoo kale waxay tilmaamayaan in beerista noocyada caleemaha sida geedo midho u dhow ay yihiin kuwo aan loo baahnayn. Ka dib oo dhan, si dhakhso ah oo aad u xoog badan u dhirta geedka, "xoqin" iyo si weyn u yareeyo dhalidda.
Marxaladaha beeridda iyo geedo geed canab ah "Amur"
Si aad u diyaariso miraha canab "Amur" waxay u baahan tahay inay bilawdo xilliga dayrta, ka dib goosashada. Waxay u baahan yihiin in la dhigo dhulka, iyagoo ku dhajinaya qoto dheer oo qiyaastii 2.5 sentimitir. Ka dib markii, kaliya sugto guga iyo ururinta geedo canab.
Haddii aad go'aansato inaad ku beerato guga, ka dibna miraha waa in lagu meeleeyaa biyo ilaa qiyaastii iyo waqtigaan ka dib, ku qas iyaga ciid iyo ka tago sanduuq (waxaa lagu dhejin karaa bac caag ah). Waxaa ugu wanaagsan in miraha sabiib ah ku hayn meel qabow, halkaasoo heerkulku uu noqon doono joogto ah at + 4 ° C.
Si ay abuurka u bisho, xitaa ka hor intaanay guga, waxaa lagu beeray dheriyo oo lagu hayaa qol heerkul ah ugu yaraan + 20 ° C. Sida kiiskii beereed ee xilliga dayrta, waxaan sugeynaa abuurka si uu u biqlo oo isku dayaan si taxadar leh oo si taxadar leh u daryeesho geedo, iyo sidoo kale dhirta kale ee gudaha.
Geedo beerto waa in la sameeyaa oo kaliya marka la yimaado xagaaga, sababtoo ah wakhtigaan oo kaliya waxay noqon doonaan kuwo ku filan oo ku habboon tan. Diiditaanka waa in la fuliyaa sida soo socota:
First of dhan, waxaan u diyaargaroobi ceelka leh cabbirka 0.5x0.5x0.6 mitir. Wixii wanaagsan ee dheecaan ka hooseeya waa inay ku shubaan lakabka biraha ah, dhumucda ugu fiicnaanta taas oo ah qiyaas ahaan 10-15 sentimitir. Isku dar ah ciidda bacrin ah iyo Bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu shubay qashinka. Aad bay muhiim u tahay in la ogaado in aysan macquul ahayn in la beero seeding toos ah si toos ah Bacriminta, tan iyo waa la gubi karaa. Sidaa darteed, lakabka kale ee carrada sahlan ayaa la dallacaa on top of bacriminta.
Nidaamka asaasiga ah ee seedling ka hor beerto waa in lagu qabtaa xal in kicin kara rooting. Ka dib markaa, waxaa la dhigayaa god oo si taxadar leh u jiifa. Waa muhiim in qoorta asalka ah aan la daboolin ciidda.
Ka dib markii laga beerto, waa in seedling waa in si daacad ah loo waraabiyo (isticmaalka qiyaastii 30-40 litir oo biyo ah) iyo mulch ciidda ku wareegsan. Peat ama cufan geedku waxaa ugu wanaagsan loo isticmaalaa mulch.
Noocyada guntooda jarjar canab "Amur"
Dharka iyo kaydka aad qorsheyneyso inaad ku beerto, hubi inaad marka hore diyaariso. Gooyn waxaa badanaa laga goostaa dayrta oo la keydiyaa ilaa guga lagu meeleeyo ciidda meel qabow. Guga waa la duuduubay oo la jarjaray (qaybta hoose ee hoose, si aad u hesho boodboodka si aad u fiican u goynta kaydka). Qeybta hoose ee jarista, iyo sidoo kale seedling, waxaa la hayaa dhowr maalmood biyo iyo xal gaar ah oo xidid ka hor inta aan la jarin.
Diyaarinta kaydka waxaa ka mid ah:
Ka saar baadiyaha hore.
Isku-xoqin stock for gooyn.
Waa mid si qaas ah u kala qaybsan ee kaydka ah in jirida la dhigo, si adag loo adkeeyo dhar qaar ama xargaha. Haddii tallaalka la sameeyo jiilaalka, ka dibna goobta goobta tallaalka waa in lagu daboolaa dhoobo qoyan, sidaas darteed qoyaanka inta ugu badan ee suurtogalka ah ayaa lagu hayaa iyada oo aan qallajinayn xilliga jiilaalka. Sidoo kale, talaalka waa in la daboolaa, kaas oo lagu falanqeyn doono faahfaahin hoose.
Maxaad ubaahan tahay inaad ogaato ku saabsan dhalida canab ee "Amur"?
Habkani waa midka ugu fudud, inkastoo uu leeyahay waxoogaa dabacsan. Muuqaalka ugu muhiimsani waa joogitaanka baadiyaha kaas, xaqiiqda, waxaad samayn kartaa ka-bax. Marka xigta, ka mid ah caleemaha dooratay xoog leh oo ugu dhow ee baxsiga dhulka. Wuxuu hoos u dhacaa dhulka oo wuxuu ku seexdaa lakabka qaro weyn ee carrada. Aad bay muhiim u tahay in ciidda ay si fiican u biyo diirran tahay, tanina waxay tahay waxa ka qayb qaadanaya aasaasida saamiyada.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo canab ah hore
Sida loo ilaaliyo oo loo kordhiyo dhalidda canab: xeerarka ilaalinta duurka beershanka sanadka oo dhan
Iraanista canab "Amur" waa in loo fuliyaa si lama filaan ah oo joogto ah oo keliya da 'yar, iyadoo nidaamka xididkuna uu korayo kaliya. Geedka canabka ah ee yar yar ayaa ka cabsanaya abaaraha, taas oo si weyn u saameeyn karta dhalidda. Iyada oo da'da baadiyaha iyo kororka mugga, kor u qaadista abaarta ayaa si weyn u kordheysa, inkastoo ay wanaagsan tahay in la joojiyo waraabinta guga hore.
Ka dib markii la waraabiyo ciidda ku wareegsan geedka canabka ah waxaa lagama maarmaan ah in la jebiyo mulchka. Ma aha oo kaliya gacan ka geysashada ilaalinta qoyaanka ee ciidda, laakiin sidoo kale inta lagu guda jiro foosha ayaa quudin doona canab iyada oo nafaqooyin. Lakabka sare ee mulchka ee canab waa 3-5 sentimitir.
Kala duwanaanta noocaan ah waa mid ka mid ah kuwa yar xitaa haddii xitaa dabaasha ugu daran aysan u baahnayn hoy gaar ah. Tani waxay sabab u tahay caabbinta aadka u sareysa ee barafka. Laakiin, oo dhan ma aha da'da yar, kaliya ka dib markii laga beerto geedka canabka ah kama faani karo sida caqli ahaan, sidaas darteed waa lagama maarmaan in ay daboolaan. Seedling a iyo canug dayrta ayaa si fiican loo daboolay iyadoo la isticmaalayo biyo-baddal sahlan ama tuubo alwaax la'aan ah maalin. Ka dib markii ay ka sarreeyeen canabkeena, waxaan si ammaan ah u buuxin karnaa carrada oo ka tagi karnaa jiilaalka. Si qaabdhismeedka noocaas ah uusan u dhicin waqti dheer, waxaa lagu xoojin karaa leben ama kuraas culus.
Haddii aan la gooyey, canabkani si dhakhso ah ayuu uga soo baxayaa warshad kala duwan oo ah nooc qurux badan. Ka dib dhan, manjooyin ma aha oo kaliya kuu ogolaanaya inaad sameysid baadiyaha, laakiin sidoo kale wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshay kororka mugga iyo tayada canab.
Laakiin si aad u bacrimiso canab "Amur" looma baahna. Waxay noqon doontaa mid ku filan mulch iyo codsiga naadir ah ee Bacriminta macdanta leh
potassium iyo fosfooraska.
Iyadoo iftiin yar oo adag oo adkaynaya baadiyaha, waxay iska caabinaysaa cayayaanka iyo cudurrada fangas si weyn ayaa loo yareeyey. Sidaa daraadeed, mid ka mid ah siyaabaha loola macaamili karo waa gooyo iyo habka saxda ah ee canab beerto. Si looga hortago cudurada sida, laba jeer ka hor ubax of baadiyaha iyo hal mar inta lagu jiro formation of rucubood canab, buufinta waxaa lagu sameeyaa diyaar garow gaar ah in badanaa ka wakiil ah dukaamada khaas ah.